Google Analytics ဖြင့် ၅ မိနစ်အတွင်း PPC ၏ကြော်ငြာခြင်းတိုးမြှင့်နည်း Martech Zone
သင်၏ AdWords မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရလဒ်များကိုမြှင့်တင်ရန် Google Analytics အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနေပါသလား။ မရရှိလျှင်သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရနိုင်သမျှသောအထောက်အကူဆုံးကိရိယာတစ်ခုမှပျောက်ဆုံးနေသည်။ တကယ်တော့၊ အချက်အလက်အမြောက်အမြားရှာဖွေခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အစီရင်ခံစာများမြောက်များစွာရှိသည်။ သင်၏ PPC Campaigns များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဤအစီရင်ခံစာများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏တိုးတက်မှုကို Google Analytics ကိုအသုံးပြုခြင်း Ad Spend သို့ပြန်သွားသည် (ROAS) တွင်သင်၌သင်၏ AdWords ရှိပြီး၊ ဂူဂဲလ် Analytics အကောင့်များမှန်မှန်ကန်ကန်စည်းရုံးပြီး“ ပန်းတိုင်” နှင့်“ အီလက်ထရွန်းနစ်ကူးပြောင်းခြင်းကူးပြောင်းခြင်းခြေရာကောက်ခြင်း” သည်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။
သင်၏ Google Analytics အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ပါ။ ကိုနှိပ်ပါ သိမ်းယူမှု> AdWords> စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ။ ဆိုက်အသုံးပြုမှုကိုနှိပ်ပါ။ ဤမက်ထရစ်ရလဒ်များကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အစည်းအဝေးများ၊ စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်း၊ သင်ခန်းစာကြာချိန်၊ အသစ်သင်ခန်းစာများ၊ အမြန်ထွက်နှုန်း၊ ရည်မှန်းချက်ပြီးဆုံးခြင်းနှင့်အခွန်။
ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲသင့်ရဲ့ PPC Campaign ကိုပုံမှန်ရလဒ်တွေနဲ့မြှင့်တင်ပေးမယ့်အရာငါးခုကိုတွေ့နိုင်သည်။
အစည်းအဝေးများ - ပုံမှန် mode ကသင့်ရဲ့ site မှာရှိတဲ့ Total Sessions ကိုပြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် PPC ကသင့် site ကိုသွားတဲ့လည်ပတ်မှုတွေကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ PPC သည်ဤအကွက်ထဲတွင်အသုံးစရိတ်အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်အားလုံး၏ ၁.၈၁% သာရှိသည်။ Session Percent သည်စုစုပေါင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်သင့်စံနှုန်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။
တွေ့ဆုံချိန် Duration - ဆိုက်အတွက်ပျမ်းမျှကြာချိန်သည် (၂း၄၆) နှင့် (၃း၁၈) ဖြစ်သည်။ PPC အသွားအလာအတွက်အထူးသဖြင့်ဆိုက်ကိုသတ်မှတ်ထားသည့်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပျမ်းမျှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကာလနိမ့်ကျသည်မှာပုံမှန်မဟုတ်သောကိစ္စမဟုတ်သော်လည်းထိုရည်မှန်းချက်မှာထိုလည်ပတ်မှုအားလုံးကို session ကြာချိန်အနည်းဆုံးသုံးမိနစ်အထိရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကာလကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဟာပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ခုန်နှုန်း - Bounce Rates များသည် Dedicated PPC Landing Pages တွင်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအမြင့်မားသောနံပါတ်များကိုဘယ်သောအခါမျှထိတ်လန့်ရန်ဘယ်သောအခါမျှကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ၈၀% အထက်သို့မတက်လျှင်ကမ်ပိန်း၏ Bounce Rates သည် ၂၈% မှ ၆၈% အထိရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Device Tabs ကိုစစ်ဆေးရန်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး Desktop, Mobile, Tablet စသည်တို့တွင်နံပါတ်များသည်ပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းရောက်ရှိနေကြောင်းသတိပြုပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကြော်ငြာကိုကြည့်ပါလိမ့်မည်။ အုပ်စုလိုက်ရွေးချယ်ပြီးအဓိကပြproblemsနာများကိုရှာပါ။
ရည်မှန်းချက်ပြီးဆုံးသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏လစာပေးသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်စုစုပေါင်း Sessions ၏ ၁.၈၁% သာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်စုစုပေါင်းရည်မှန်းချက်ပြီးဆုံးခြင်း (Leads + Transaction) ၏ ၁.၇၂% ကိုသာထုတ်လုပ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ဒီရိက္ခာရည်မှန်းချက်ပြည့်စုံမှု 1.81% အထိတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည့် Sessions ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ (Sessions) သို့တိုးမြှင့်ခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်းအားအခြားရည်မှန်းချက်တစ်ခုအဖြစ်အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အခွန် - ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ကောင်းမွန်သောသတင်းမှာလည်ပတ်မှု၏ ၁.၈၁% သာစုစုပေါင်းအခွန်၏ ၆.၈၇% ကိုထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒီနံပါတ်များနဲ့ PPC ဟာဒီ site အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒီနံပါတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းသည်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့နဲ့ PPC စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာပိုက်ဆံများများဆုံးရှုံးခြင်းကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြသနိူင်သည်။ သို့သော်ထိုဘတ်ဂျက်ကိုမတိုးမီ ROI နှင့် Margin တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်တစ်မိနစ်အချိန်ယူပါ။ ဤကိန်းဂဏန်းများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်တိုးမြှင့်ခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုခိုင်မာသောအဖြေပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုအရာအားလုံးကိုပို့စ်တစ်ခုတွင်ဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရှိပါ။
ထို့ကြောင့် ၅ မိနစ်အတွင်းတွင်တိုးတက်ရန်ရည်မှန်းချက်သုံးခုကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
တိုးပွားလာ Session သင်တန်းကာလ စာမျက်နှာနှုန်း 3:00 ကျော်ရန်။
တိုးတက်လာသော ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်မှုအခမ်းအနားများနှင့်အချိုး (အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးမက်ထရစ်များသည်ကောင်းပြီးရလဒ်များက Lead Gen အစီအစဉ်အတွက်ကူးပြောင်းခြင်း Optimization ကိုစတင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ROI နှင့်မာဂျင် PPC စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်မှုအတွက်ပိုမိုပညာရှိပြီးအန္တရာယ်နည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်မက်ထရစ်။
သင်၏ငါးမိနစ်ကြာသင်ခန်းစာစဉ်အတွင်းသင်ချမှတ်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များတိုးတက်လာရန်သင့်အားအကူအညီအချို့ပေးလိုပါသည်။ ဤပန်းတိုင်များကိုလက်တွေ့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်နှင့်သင်၏ PPC စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသင်တတ်နိုင်သည်ထက်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမပြုဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သော ROI ရရှိရန်ကူညီနိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Session Duration ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြမည် အသွားအလာအရင်းအမြစ်များ> ကြော်ငြာခြင်း> AdWords.
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖြင့်ကြည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှု ၅ ခုအနက် ၂ ခုသည်ပျမ်းမျှ ၃ ရက် ၃၀ ထက်ပိုသောပျမ်းမျှ Session Durations ရှိသည် ကျန်တဲ့သုံးခုကိုအာရုံစိုက်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြော်ငြာအဖွဲ့ ၄၀ ရှိပြီး၊ ၁၀ ခုသည်ပျမ်းမျှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကာလ <40:10 ရှိသည်။
အောက် AdWords> သော့ချက်စာလုံးများ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကာလအလိုက်စီပြီးပျမ်းမျှအစည်းအဝေးများနှင့်အတူ <36:1 သော့ချက်စာလုံး 00 ရှာဖွေတွေ့ရှိ။
သော့ချက်စာလုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်အသုံးမပြုမီ၊ Keyword Positions ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ကြစို့။
သော့ချက်စာလုံးကိုရွေးပြီး Secondary Dimension ကိုပျမ်းမျှ Session Duration အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။
ထိပ်ဆုံး ၁ - ၀၂:၃၈ (ရာထူး ၁)
ဘေးထွက် 1 - 03:58 (ရာထူး 4)
ဤသော့ချက်စာလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျမ်းမျှကြော်ငြာနေရာ - AdWords တစ်ခုအနေဖြင့် - ၂.၇ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပျမ်းမျှကြော်ငြာနေရာသည် ၂.၀ (၁.၀ မှ ၁.၉) ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Max CPC Bid ကိုပိုမိုမြင့်မားသောကြော်ငြာနေရာများသို့လျှော့ချရန်စဉ်းစားလိမ့်မည်။
အခြားသော့ချက်စာလုံးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြော်ငြာနေရာများတွင်အစိုင်အခဲဖြစ်ပါကမက်စ် CPC ဈေးနှုန်းများတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
အချို့သောသော့ချက်စာလုံးများသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း“ ထိုက်သည်” နှင့်ထိုက်တန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ AdWords အကောင့်တွင်ခဏရပ်နားသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
Daypart Tab အောက်တွင်၊
ဤရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများသည်နံနက် ၄ နာရီမှနံနက် ၇ နာရီအကြားမလည်ပတ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများကိုစီစဉ်ရန် AdWords အကောင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီ။
ရှုပ်ထွေးမှု၊ မတိကျမှု၊ မမှန်ကန်မှုသို့မဟုတ်ခေတ်နောက်ကျနေသောအကြောင်းအရာများကိုဖော်ထုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
အထူးသဖြင့်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများတကယ်လိုအပ်ပါသလားဟုမေးခွန်းထုတ်ပါ။
content ည့်သည်များသည်ညွှန်ကြားချက်များကိုအလွယ်တကူလိုက်နာပြီးလိုလားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်အကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးပါ။
နိမ့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်စံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အောက်မှာ - လုပ်ဆောင်သောမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်။
Search Query, Ad Content နှင့် Landing Page Content များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ညှိရန် Landing Pages အသစ်များကိုဖန်တီးပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိကမ်းတက်စာမျက်နှာများတွင်ဗီဒီယိုမပါ ၀ င်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုထပ်မံထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။
ကန ဦး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်၏ Lead Gen အစိတ်အပိုင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်နေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကာလတိုရည်မှန်းချက်မှာ Lead Gen Converter Rate ကို ၁၀% ကျော်တိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စတင်မည့်နေရာဤနေရာသည် (site နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ AdWords အကောင့်အတွင်း)
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းတက်စာမျက်နှာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ လူတွေကိုဘယ်နေရာကိုပို့နေတာလဲ။ အသုံးပြုသူများသည်သူတို့လိုချင်သောသို့မဟုတ်လိုအပ်သည်ကိုချက်ချင်းမတွေ့ပါကထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုအင်္ဂါရပ်များအစားအဓိကထားနေပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဆိုင်သူများ၏ဆိုက်များတွင်မတွေ့ရသောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာရှိပါသလား။
ငါတို့ကမ်းတက်စာမျက်နှာတွေမှာဗွီဒီယိုရှိသလား။ မရရှိလျှင်, ငါတို့ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ, ၏ရှေ့မှောက်တွင် ကူးယူမှုနှုန်းသည် ၂၀% မှ ၂၅% အကြားဗွီဒီယိုသည်ဓာတ်လှေကားကိုထောက်ပံ့ပေးသည်အသုံးပြုသူများအမှန်တကယ်ကြည့်သည်ဖြစ်စေ၊
PPC ကမ်းလှမ်းမှုစာမျက်နှာများကိုသီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်ဆုံးနှင့်တိကျမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သောသက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့နေပါသလား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကဘာလဲ? ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီက Demo သို့မဟုတ် Trial ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ ဒီစမ်းသပ်မှုသည် Demo ကို ၁၀၀% ကျော်ဖြင့် Out-performance လုပ်ခဲ့သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ Demo ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသုံးစွဲသူများအကြားတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုသည် ၇၅% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ခဲပမာဏနှင့်အခွန်နှစ်မျိုးလုံးခံစားခဲ့ရသည်။
အလားအလာကောင်းများကိုကြိုတင်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောအရာများကိုတားဆီးရန်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပြီးပြီလား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တော်တော်များများသည်အလုပ်လျှောက်လွှာ“ Contacts” နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤမေးခွန်းများကို (နှင့်ဖြုန်းတီးသောအသုံးစရိတ်များ) ကိုအမှားပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သော့ချက်စာလုံးအားလုံးအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အနိမ့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (TBD) အောက်တွင်လုပ်ဆောင်သောသူများအားအငြိမ်းစားယူပါ။
Go ည့်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကူးပြောင်းခြင်းလမ်းကြောင်း (များ) မှမည်သည့်နေရာနှင့်အဘယ်ကြောင့်ထွက်သွားကြသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၅ မိနစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ PPC သည်စုစုပေါင်းရောင်းအားရာခိုင်နှုန်းနှင့်စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားယာဉ်အသွားအလာရင်းမြစ်အားလုံးထက်ကျော်လွန်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ PPC ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်မှုကိုအတည်ပြုရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics သို့ပြန်သွားသည်။
ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics အကောင့်သို့ ၀ င်ပြီးသွားခဲ့သည် ပြောင်းလဲမှုများ> အရည်အချင်း နှင့်အမျိုးအစားအောက်, ကိုရွေးပါ AdWords အ။ Default Setting သည် Last Interaction ဖြစ်ပြီးအဓိက Dimension မှာ Campaign ဖြစ်သည်။
ဒီအမြင်ကကျွန်တော်တို့ကို Campaign, Spend, Last Interaction Conversions, Last Interaction CPA, Last Interaction Value နှင့် Ad On On Spend (ROAS) တို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီသတိပြုရမည့်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ဤဥပမာတွင်ကုမ္ပဏီသည်အမြတ်အစွန်းနည်းပါးသောကြောင့်အမြတ်အစွန်းရရန် ၁၀၀၀% (၁၀ မှ ၁ ROI) ROAS ရှိရန်လိုအပ်ပြီး၊ ကြီးထွားရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသောဘတ်ဂျက်ငယ်တစ်ခုပေါ်တွင်လည်ပတ်နေခဲ့သည်။
တစ်ချက်ကြည့်လျှင် ROAS> ၁၀၀၀% ဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးငါးခုအနက်မှတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Ad Group ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှု။ ROAS နှင့်အတူကြော်ငြာအုပ်စုသုံးခုကို ၂,၁၆၀% မှ ၈,၄၄၅% အသီးသီးတွေ့ရသည်။
ဒုတိယစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်တတိယကြော်ငြာအဖွဲ့သည် ROAS> 800% ဖြင့်လက်ရှိလည်ပတ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအုပ်စုများကိုပိတ်ထားခြင်းအားဖြင့်ဒုတိယစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်ရည်မှန်းထားသော ၁၀၀၀% ROAS ရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်နိုင်သည်။ အခြားကင်ပိန်းပြီးသား Goal vs. + 1,000% ဖျော်ဖြေနေသည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်ဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချလက်ချအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုအတွက်အာမခံချက်မရှိသော်လည်းအသုံးစရိတ် ၅၀% တိုးခြင်းသည်သက်ဆိုင်ရာအခွန်များတိုးမြှင့်သွားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ် ဦး ချင်းစီအပိုဆောင်းပစ်မှတ်ထားအသုံးစရိတ်၏ $ 50 အဘို့, ငါတို့အခွန်အတွက် $ 700 ၏တိုးလာကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်!
SEM Manager တစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည်ဆိုက်တစ်ခုသို့အသွားအလာကိုမောင်းသည့်အခါသင်၏အလုပ်သည်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်
သင်၏ Google Analytics အကောင့်သို့ ၀ င်ပါ၊ တစ်ခုတည်းသောအစီရင်ခံစာဖြင့်စတင်ပါ၊ ၅ မိနစ်အတွင်းသင်မည်မျှရှာဖွေနိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။ သင်ဆန်းစစ်နိုင်သည့်အခြားအစီရင်ခံစာများစွာကိုကြည့်သောအခါသင်မည်မျှရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
Tags: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရည်မှန်းချက်များထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတုံမှုနှုန်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းဆိုးကျိုးရည်မှန်းချက်ပြီးဆုံးanalytics googleGoogle Analytics ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းGoogle analytics ရည်မှန်းချက်များနောက်ဆုံးအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများနောက်ဆုံးအပြန်အလှန် CPAနောက်ဆုံးအပြန်အလှန်တန်ဖိုးလည်ပတ်မှုအသစ်များစာမျက်နှာအမြင်များပေးဆောင်ရှာဖွေရေးတစ် ဦး ကလစ်နှိပ်ပါမန်နေဂျာနှုန်းပေးဆောင်ppcppc မန်နေဂျာကြော်ငြာအသုံးစရိတ်အပေါ်ပြန်သွားပါအခွန်ဝန်ကြီးဌာနလှိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာသုံးစှဲအလည်အပတ်ခရီးလည်ပတ်
Sysomos Gaze - လူမှုမီဒီယာအတွက်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်း
စက်တင်ဘာ 15, 2015 မှာ 11: 48 AM
ဟိုင်းခရစ်၊ ဒီဟာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂူးဂဲလ်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အရာကနေသူတို့ရဲ့ဝေါဟာရတွေကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်တော့ခေတ်နောက်ကျနေပုံရတယ်။ http://marketingland.com/google-changes-menu-options-adds-new-reports-in-google-analytics-61060 ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်“ အသွားအလာရင်းမြစ်များ” ကို“ Acquisition” သို့ပြောင်းပြီး“ Visits” သည်ယခုအခါ“ Sessions” ဖြစ်သည်။
သင်၏လမ်းကြောင်း - အသွားအလာရင်းမြစ်များ> ကြော်ငြာခြင်း> AdWords> စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ
ယခုဖြစ်သည်: Acquisition> AdWords> Campaigns
ပထမဆုံးပြသသောစခရင်သည်လည်းယခုကွဲပြားနေပြီ။ သင်မျက်နှာပြင်တွင် Session Duration မရတော့ပါ။ ယခု၎င်းကိုရယူရန်နည်းတစ်နည်းမှာ Acquisition> All Traffic> Source / Medium သို့ သွား၍ CPC အတွက်စစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာတကယ်ကောင်းတဲ့အချက်အလက်ပဲ။ ဒါကိုနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ပေါ်ဖန်သားပြင်တွေ၊ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။
17:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 27 မှာ